Sekuru varikundirova MAGARO after ndakavaona vachisvira mbuya muBedroom ndodii – Makuhwa.co.zw
Sekuru varikundirova MAGARO after ndakavaona vachisvira mbuya muBedroom ndodii
Ndiri musikana ane makore 19 ekuberekwa ndinogara mu Sakubva kwaMutare. Ndaigara kuZimunya asi pandakapedza Form 4 handina kubuda zvakanaka ndakabuda ne 2 subjects chete saka Sekuru vakanditora kuti ndinogara navo kwaMutare ndichiedza kuti ndinyorese futi mamwe ma subjects andakafoira.
Pave ne 2 months ndabva Zimunya asi muyedzo yandapinda yandikurira. Sekuru vangu ava i brother yamai vangu, uye vane makore 27 uye vane mudzimai wavo watinogara pamwechete naye. Ndakamboona mafirimu evanhu vanokwirana asi handisati ndakamboona munhu anokwira sasekuru vangu.
Vanokwirana nambuya kana ka 4 or 5 times everyday. Kuseni patinopedza kumwa tea vanongobata mbuya ruoko voti “huya ndimbokudzidzisa”. Veduwee mbuya vanokwirwa zvekuti vanoswera vakarara vozomuka zuva ratofamba. Last month ndaibika hangu ndobva ndanzwa mbuya vachichemerera ndikati rega ndimbodongorera ndione zvavari kuita sezvo door ravo remubedroom harinyatsovhara. Veduwee sekuru vangu vanoshanda basa mubedroom kwete zvekutamba.
Ndakavaona ziya richiyerera nemusana, vakanditarisa mumaziso angu asi hapana chavakataura uye havana kumira basa ravo. Mbuya havana kana kuona kuti ndaidongorera nekuti vanga vari pasi sekuru vari pamusoro pavo. Handina kana chandakataura ipapo, ndakabva ndangodzoka hangu kobika.
Ndinoziva kuti sekuru havana kutaurira mbuya kuti ndakavaona vachikwirana nekuti nambuya tinowirirana rough. Manje dambudziko ravepo nderekuti sekuru last week vakandiwana ndichibika mukitchen ndokubva vandirova kambama kumagaro, ndakango nyemwerera ndikavati “sekuru mune musikanzwa”. Saka chave kundinetsa ndechekuti zvinorevei kundirova kambama kwevakaita kumagaro, veduwe ndibatsireiwo ndisati ndasvirwa naSekuru kuno…..
Related Topics:Sekuru varikundirova MAGARO
Ndakabatwa ndichisvira mai Dee nemurume wavo awuya pakati pehusiku!
Ndakaita CHIRWERE CHENYERE NDOKUSVIRISA MURUME WE SISTER YANGU NO Sister wangu akusvirwa nemurume wangu – Please help